Norway’s GDP နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေအဆင့်အတန်းမြင့်မားလှတယ် – IX | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » Norway’s GDP နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေအဆင့်အတန်းမြင့်မားလှတယ် – IX
Norway’s GDP နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေအဆင့်အတန်းမြင့်မားလှတယ် – IX
Posted by Kyaemon on Jul 15, 2012 in Business & Economics, Critic, Education, Money & Finance, Think Different |6comments
Norway GDP comparison Norway's GDP
နိုင်ငံတကာ ငွေရေးကြေးရေးရံပုံငွေအဖွဲ့ (၂၀၁၀-၁၁) ဇယား
အမှတ်စဉ် ၄ ချိတ်တာ
ကမ်ဘာ့ ဘဏ် (၂၀၀၅-၁၁) ဇယား
အမှတ်စဉ် ၄ ဘဲ ထပ်ချိတ်တာ
စီအိုင်အေ ကမ်ဘာ့ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်း (၁၉၉၃-၂၀၁၁) ဇယား
အမှတ်စဉ် ၆ ချိတ်တာ
ဘယ်ဇယားဘဲကြည့်ကြည့် နော်ဝေပြည်သူတွေက တဦးချင်းဝင်ငွေများ ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝ နေတာ
US, Canada, Australia တို့ထက်ပင် ဟန်ကျမျက်နှာပွင့်နေတာ
This article includes three lists of countries by gross domestic product at purchasing power parity per capita, the value of all final goods and services produced withinacountry inagiven year divided by the average (or mid-year) population for the same year…..
၁၉၈ဝ တုန်းက $ ၈၀၀ဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီး
၂၀၁ဝ မှာကျတော့ ၅၅၀၀ဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားလို့
တစ်ဆကနေ ခုနှစ် ဆ ဖြစ်နေတာ၊
မြန်မာ အတွက် အပြာ နုရောင် လိုင်းကြောင်း က အောက်နားမှာ “ဂျို” ကပ်နေတာ၊
နောက်ပိုင်းမှာ မဖြစ်စလောက် လှုပ်ရှား လာတာ၊
ယိုးဒယား အဝါလိုင်း က မြန်မာရဲ့ ၂ ပြန်ကနေ ၄ပြန် လောက်ရှိလာတာ
ယူအက်စ် (မြင်းချီးရောင်လိုင်း) က နော်ဝေ (အစိမ်းရင့်ရောင်လိုင်း) ထက် မြင့်တာ က
၁၉၈ဝ ကနေ ၁၉၉၉ ဝန်းကျင်ထိ ဖြစ်တာ၊
ယင်းကာလနောက်ပိုင်း ဆိုရင် နော်ဝေ က နှစ်တိုင်းလိုလို သာလွန်နေတော့တာ
GDP per capita, PPP (current international $) – Country Comparison
Data source: World Bank, World Development Indicators – Last updated March 2, 2011
See also: Thematic map
၁၉၈ဝ မှာ $ ၁၂၅၆၄
၂၀၁ဝ မှာ $ ၅၁၉၅၉ (လေးဆဖြစ်လာတာ)
World Bank နဲ့ IMF တို့ ၁၉၈ဝ အ စ ပိုင်း က ကိန်းဂဏန်းတွေ မတူသော်လည်း နော်ဝေရဲ့
ဝင်ငွေ က အဆင့်မြင့်တာ နဲ့တိုးတက်မှုပမာဏကြီးတာ ကိုတွေ့နိုင်တာ
၂၀၀၉ တွင် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကို အများဆုံးထုတ်လုပ်ကြတဲ့ ဆယ်နိုင်ငံ ဇယား
ရေးအားလျှပ်စစ် သုံးတာ နော်ဝေ က ထိပ်ကပါ၊ ယူအက်စ် က အမှတ်စဉ် ၁ဝ က နေရာယူ နောက်ကလိုက်ရတာ
၁၄ ချိုး တချိုးဘဲ၊ တော်တော်ကွာတာ
နော်ဝေ ကဝင်ငွေ ကြီးတာက North Sea ပင်လယ် မှရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေတွေ့တာကအဓိက ဖြစ်တာ
သို့သော် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများအစားကို ထုတ်လုပ်ပြီး
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ကို ရောင်းချ နိုင်တာ ကြောင့်လဲ အရေးပါတာ၊
The U.S. ranks 10th in hydroelectric use « Ranking America
According to the International Energy Agency, 7.4% of the United States’ energy domestic energy generation comes from hydroelectric sources, which makes the United States rank tenth in that category. Norway ranks first, with 98.5% of its domestic energy consumption coming from hydroelectric sources.
Norway sets plans for power cables to UK, Germany | Energy & Oil | Reuters
နော်ဝေ က ဂျာမဏီ နဲ့ ယူကေ သို့ ရေအား လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပိုမို ပို့ဆောင် ရောင်းချနိုင်ဘို့ ပင်လယ် အောက် ဓာတ်ကြိုးများထပ်ခင်းမယ်၊
နွေရာသီမှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဈေးကောင်းတုန်း ပိုမိုရောင်း ကာ၊ ဆောင်းရာသီ ကျတော့ ဈေးသက်သာချိန်မှာပြန်လည်ဝယ်ယူတင်သွင်းမယ်၊လို့ထုတ်ဖော်
OSLO, June 21 (Reuters) – Norway confirmed plans to lay the world’s longest subsea power cable to Britain by 2020 as well asalink to Germany by 2018 to increase its hydropower exports, officials and power companies said on Thursday.
The links would enable Norway, which depends on hydropower generation, to export more power when prices are higher in Germany and the UK and import it when dry weather forces prices up at home, the energy ministry said.
They also would help the three countries ensure secure, stable power supplies as Europe increases renewable energy generation.
Norwegian transmission system operator Statnett said it had signed an agreement with the UK’s National Grid to builda700 km (435 miles) sub-sea cable with 1,400 megawatts (MW) capacity by 2020.
“When completed, it will be the world’s longest subsea power cable,” it added.
Inaseparate statement, Statnett confirmed plans to builda1,400 MW link to Germany by 2018 in partnership with German system operator TenneT and German state-controlled bank KfW.
TenneT said the detailed agreement is to be signed in September this year, and the investment decision is due in 2014.
“The increase in interconnections would allow more stable power prices both in Norway and the Nordic market,” said Ole Tom Djupskas, an analyst at Point Carbon,amarket analysis company of Thomson Reuters.
Statnett said it planned to submit an application to the Norwegian government in the first half of 2013 foralicense to build the link to Britain.
သူတို့နိုင်ငံမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်တာကတော့ သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ဘူးလားဟင် ..
ထိခိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာက တရုတ်မို့လို့ စိတ်မချတာလားဟင်င်င်င်င်…………….
နော်ဝေက သူ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရဲ့ လိုအပ်ချက် ၉၈.၅ % ကို
ရေအား လျှပ်စစ် က ယူတာကိုး ။
မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ပါတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှာကို စိုးရိမ်ပြီး ၊
ရေအား လျှပ်စစ်ကို သိပ်ကြောက်နေရင်တော့ ။
သေချာတာကတော့ လျှပ်စစ် မပေးနိုင်ရင် ၊
ဘယ် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ မလာဘူးကွယ့် ။
ခပ် မွဲမွဲလေးပဲ ဆက်နေကြတာပေါ့ကွယ် ။
အခြားအရာတွေနဲ့ “ လဲ ” ယူရတာပါ..။
ကိုယ့်မှာရှိနှင့်တဲ့ တစုံတရာ(တွေ)နဲ့ “ လဲ ” ယူရတာပါ..။
အဓိကက မလဲ ဘို့မဟုတ်ပါဘူး..။
“မနာအောင် ” လဲတတ်ဘို့ နဲ့ “သာ” အောင် လဲတတ်ဘို့ပါ..။
အကျိုးစီးပွားကိုနားလည်တဲ့ စီးပွားရေးအမြင် ရှိဘို့လိုပါတယ်။
တရုတ်ကြီးရေ တာ့တာပါ….။ အဟတ် အဟတ်…….ခွိ ခွိ ခွိ…..
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ အခြေစိုက် နည်းပညာနဲ့ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ GE ကုမ္ပဏီ က မြန်မာနိုင်ငံက ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ (၂) ရုံမှာ
ဆေးဖက်ဆိုင်ရာသုံး ကိရိယာတွေ တပ်ဆင်ပေးဖို့ သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆို လိုက်ကြောင်း ဒီကနေ့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ (၂) ရုံမှာ နှလုံးစမ်းသပ်တဲ့ ဓါတ်မှန် ရိုက်စက် (၂) လုံးတပ်ဆင်ပေးဖို့ စာချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ယာယီ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက် ပထမဦးဆုံး ဝင်ရောက်လာတဲ့ ကုမ္ပဏီ
ဖြစ်ပြီး GE ကုမ္ပဏီနဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက Sea Lion ကုမ္ပဏီဟာ ဒေါ်လာ (၂)သန်းလောက်သာ မတည်ငွေရှိတဲ့ သေးငယ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ (၃၇) ခုက လူပေါင်း ၇ဝ လောက် ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ဟာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရေး အခွင့်အလမ်းတွေ ရှာဖွေဖို့
ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပဲ အမေရိကန် သမ္မတ Barack Obama က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ ရင်းနှီးမြုပ် ခွင့်တွေ ဖွင့်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။http://www.thithtoolwin.com/2012/07/blog-post_9013.html#.UAIugVIsGmA
ဒေတာတွေအရတော့ ကားရဲန်း ကာရဲန်စီ(လက်ငင်းငွေလဲနှုန်းနဲ့တွက်ထားသောဒေတာများ)
စီးပွါးရေးပညာသဘောအရ ရီးရယ် (နှစ်တနှစ်ကိုစံထားတွက်နှုန်း/ ဒါမှမဟုတ်ဂျီဒီပီဒီဖလေတာနဲ့ညှိပြီးသား)
အင်ဖလေးနဲ့ညှိပြီးသား ဂျီဒီပီ ဒီဖလေတာနဲ့ စားပြီးသားကိန်းဂဏန်းတွေဆိုရင်တော့
ပိုပြီး ရီလိုင်းအေးဘယ် ဒေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းနည်းသော နိုင်ငံများဆိုပြီး သိပ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရပြန်
ပါဘူး။ ဒီဖလေး(ငွေကျစ်နှုန်း)ကလည်း ရေရှည်မှာ ဝယ်လိုအားမရှိသော ပစ္စည်းပုံကြီးတွေနဲ့
လုပ်ငန်းတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စီးပွါးပျက်ကပ်
ဆိုက်နေတာ ဥရောပနိုင်ငံတွေ၊အရှေ့အာရှကချမ်းသာသောနိုင်ငံတွေမှာ ထင်ရှားစွာတွေ့ရပါတယ်။
ငွေကြေးကိုတိုင်းတာတဲ့အထဲမှာ အဲဒီ ပီပီပီ နဲ့ တိုင်းတာကြီးကိုလည်းသိပ် သဘောမကျလှပါဘူး။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ပန်းသီးတလုံး၊ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတခုခုရဲ့ တန်ဘိုးကို ပုံသေထားပြီးနှိုင်းယှဉ်
တာကြီးဆိုတော့ ဝယ်လိုအား (ပီပီပီ = ပါချေးဇင်းပါဝါ ပရိုင်ရတီ) ရဲ့ ဈေးနှုန်းတခုထဲကိုဘဲ ကြည့်သလို
ဖြစ်နေတော့ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နည်းတဲ့ နိုင်ငံအတွက် (သို့)ပစ္စည်းပေါတဲ့ နိုင်ငံအတွက် အသာစီးရနေ
ပြီးတော့ အမြဲတမ်းလိုလိုပါဘဲ အဲဒီ (ရိတ်=နှုန်း) တွေက ခုနက တိုင်းတာမှုအားနည်းနေပါတယ်လို့
ပြောနေရတဲ့ ကားရဲန်းရိတ်( လက်ငင်းငွေလဲနှုန်း) တွေနဲ့ တိုင်းတာ တာထက်ကိုအမြဲ “မြင့်” နေတာကလဲ
အရမ်းကြီးဘယ်နှစ်ဆ ဆိုတာမျိုးကိုတော့ စွတ်ပြောလို့တော့မသင့်လှပေဘူးလို့ ထင်မိပါရဲ့။
ဒီထက်ပိုပြောရရင် တိုက်ဂါးကြီးတော့ ဖွတ်ပရင့် လဲ မသေးပါဘူး။
ပြည်ပကြွေးမြီတွေက အဲဒီလိုဝင်ငွေကောင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေက
စက္ကူူပိုက်ဆံ (ခရက်ဒစ်ကာဒ်)တွေရဲ့ ကြွေးမြီဆိုတာလူတိုင်းမှာကိုရှိတာပါ။
ပြီးတော့ တဦးကျဝင်ငွေဆိုတာကလဲ လူဦးရေနဲ့ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ ဂျီဒီပီကိုစားထားတာဆိုတော့
ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံတွေဆိုရင်လည်း အားကိုးရတဲ့ ဒေတာတွေလို့မပြောနိုင်ပြန်ပါဘူး။
ဒါက ဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေအတွက်ပါ။
စရိတ်ရဲ့ ဆယ်ပုံတပုံသောငွေနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ သာမာန်မိသားစုနေလို့ပါတယ်)
ဆိုတော့ အဲဒီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့သာမန်ဝင်ငွေထက် ဆယ်ပုံတပုံတောင်မရရင်တော့